တရားခံလွှဲပြောင်းရေး ဥပေဒမူကြမ်းကို ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံသို့ တရားခံများလွှဲပြောင်းပေးနိုင်တဲ့ ဥပဒေမူကြမ်းကို ဟောင်ကောင်မှာ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြရာ မူလက ငြိမ်းချမ်းစွာ စုရုံးချီတက်ဆန္ဒပြပွဲ ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ အကြမ်းဖက်မှုနဲ့အတူ ပြီးဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
တနင်္ဂနွေနေ့ (ဇွန် ၉ ရက်) နေ့မှာ စတင်ခဲ့ကြတဲ့ တရားခံလွှဲပြောင်းရေး ဥပဒေမူကြမ်းကို ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်သူ ရာနဲ့ချီတဲ့ ဆန္ဒပြလူအုပ်စုနဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့တို့ကြား ယနေ့ (ဇွန် ၁၀ ရက်) မနက်အစောပိုင်းမှာ ထိပ်တိုက်တွေ့မှုတွေ့ ပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်လို့ AFP သတင်းက ပြောပါတယ်။
အဆိုပါ ဆန္ဒပြပွဲဟာ ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှာ ဗြိတိန်နိုင်ငံက ဟောင်ကောင်ကို တရုတ်ထံသို့ ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်အတွင်း အကြီးုဆုံး ဆန္ဒပြပွဲလည်းဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဆန္ဒပြပွဲမှာ လူဦးရေတစ်သန်းကျော်အထိ ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ စီစဉ်သူတွေက ပြောကြပါတယ်။ ရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့ ဆန္ဒပြပွဲအရှိန်အမြင့်ဆုံး ဖြစ်လာခဲ့စဉ် လူဦးရေ ၂၄၀,၀၀၀ အထိ ရှိခဲ့တယ်လို့ ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြသူတွေက တရုတ်အစိုးရကိုထောက်ခံတဲ့ ဟောင်ကောင်အာဏာပိုင်တွေနဲ့ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်နေကြမှုဟာ အဓိက နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းတစ်ခု ဖြစ်နေကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ ဟောင်ကောင်အာဏာပိုင်တွေက ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့ တရားခံနဲ့ သံသယရှိသူတွေကို တရုတ်အပါအဝင် အခြားနိုင်ငံများသို့ လွှဲပြောင်းပေးနိုင်တဲ့ ဥပဒေတစ်ရပ်ကို ပြဌာန်းရန်ပြင်ဆင်နေပါတယ်။
ဟောင်ကောင်ဟာ ယခင်က တရုတ်ပြည်မကြီး အပါအဝင် အခြားနိုင်ငံများနဲ့ တရားခံလွှဲပြောင်းရေးဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက် မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဟောင်ကောင်အစိုးရက တရားခံလွှဲပြောင်းရေး ဥပဒေမူကြမ်းကို ဥပဒေပြုကောင်စီ (ဟောင်ကောင်လွှတ်တော်) မှာ တင်သွင်းခဲ့ပြီးနောက် ဒေါသတကြီး တုံ့ပြန်မှုတွေ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီး အတိုက်အခံ ဆန္ဒပြမှုတွေ အကြီးအကျယ် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
တနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့ ဆန္ဒပြလူအုပ်စုကြီးက ဟောင်ကောင်လမ်းမတွေပေါ်မှာ စုရုံးချီတက်ကြပြီး အစိုးရရဲ့ တရားခံလွှဲပြောင်းရေး ဥပဒေပြဌာန်းမယ့် အစီအစဉ်ကို ဖျက်သိမ်းရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ ဆန္ဒပြမှုတွေဟာ ညပိုင်းအချိန်အထိ မည်သည့်ပြဿနာမျှ မပေါ်ပေါက်ခဲ့ပေမဲ ညဉ့်နက်ပိုင်းကိုကျော်လွန်ပြီး တနင်္လာနေ့အကူးမှာတော့ ဟောင်ကောင်လွှတ်တော် အပြင်ဘက်မှာ ညလုံးပေါက် စုရုံးနေခဲ့ကြတဲ့ ဆန္ဒပြသူတွေကို ရဲတပ်ဖွဲ့က ရှင်းလင်းရန်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာမှ အကြမ်းဖက်မှုတွေ စတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ရဲတပ်ဖွဲ့က ဆန္ဒပြပွဲ ခွင့်ပြုချိန်ကျော်လွန်သွားပြီးနောက် လူစုခွဲရှင်းလင်းရန် လုပ်ဆောင်လာခဲ့ရာ ဆန္ဒပြသူတွေက ပုလင်းများနဲ့ပစ်ပေါက်ခြင်း၊ အတားအဆီးများအသုံးပြုခြင်းတို့ဖြင့် တုံ့ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ ရဲတပ်ဖွဲ့က ငရုပ်ကောင်းရည်ဖြန်းပက်ပြီး ဆန္ဒပြလူအုပ်စုကို ဖြိုခွဲရန်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဆန္ဒပြလူအုပ်စုက 'ငါတို့မှာ ဆန္ဒပြခွင့်ရှိတယ်' လို့ အော်ဟစ်ခဲ့ကြကြောင်းလည်း AFP က ရေးသားဖော်ပြပါတယ်။
ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ကြား ထိပ်တိုက်တွေ့မှုတွေ ဆက်တိုက်ပေါ်ပေါက်နေခဲ့ပြီး ဟောင်ကောင်လမ်းမတွေပေါ်မှာ ကြောင်နဲ့ကြွက်ကဲ့သို့ လိုက်တမ်းပြေးတမ်း ကစားသလိုဖြစ်နေခဲ့ကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။ ယမန်နေ့ ဆန္ဒပြပွဲဟာ အလွန်ကြီးမားခဲ့ပြီး အစိုးရအနေနဲ့ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြသူ အရေအတွက်ကို လစ်လျူမရှုနိုင်ကြောင်း ဆန္ဒပြပွဲမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ် ပီတာချန်းက AFP ကို ပြောပါတယ်။
"သူတို့က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တောင်းဆိုမှုတွေကို မတုံ့ပြန်ခဲ့ဘူးဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က နောက်ထပ် လှုပ်ရှားမှုတွေ ဆက်လုပ်သွားမှာပါ" လို့ ၎င်းကဆိုပါတယ်။ တနင်္ဂနွေနေ့က ဟောင်ကောင်လမ်းမတွေပေါ်မှာ ခြောက်နာရီကျော်ကြာ စုရုံးချီတက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြမှုအတွင်း 'မကောင်းဆိုးဝါး ဥပဒေကို ဖျက်သိမ်းပစ်!' 'တရုတ်ကို တရားခံလွှဲပြောင်းရေးကို ကန့်ကွက်ကြ!' အစရှိတဲ့ ကြွေးကြော်သံများ သံပြိုင်ကြွေးကြော်ခဲ့ကြပါတယ်။
(ဗန်ကူဗာမြို့ရှိ တရုတ်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးရှေ့ ဆန္ဒပြမှုမြင်ကွင်း) (Photo: AFP)
လူဦးရေ ၇.၃ သန်းရှိတဲ့ ဟောင်ကောင်မှာ ၂၀၀၃ ခုနှစ်ကလည်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာဥပဒေကို ပယ်ဖျက်ရန် ခန့်မှန်းခြေ လူဦးရေငါးသိန်းပါဝင်တဲ့ စုရုံးဆန္ဒပြပွဲ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဟောင်ကောင်မှ တရုတ်ပြည်မကြီးသို့ တရားခံလွှဲပြောင်းရေး ဥပဒေမူကြမ်းကို သြစတြေးလျနိုင်ငံ ဗန်ကူဗာမြို့ရှိ တရုတ်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးရှေ့မှာလည်း လူဦးရေရာနဲ့ချီပြီး တနင်္ဂနွေနေ့က စုရုံးဆန္ဒပြခဲ့ကြကြောင်း သိရပါတယ်။
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းတွေအရ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှု အကြီးအကျယ် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပေမဲ့ တရားခံလွှဲပြောင်းရေး ဥပဒေမူကြမ်းကို ဖျက်သိမ်းမှာမဟုတ်ကြောင်း တရုတ်အစိုးရကို လိုလားတဲ့ ဟောင်ကောင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ကာရီလမ် (Carrie Lam) က ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့မှာ ပြောကြားလိုက်ကြောင်း သိရပါတယ်။
(ဟောင်ကောင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ကာရီလမ်) (Photo: AFP)
ထိုနေ့မှာပင် တရုတ်အစိုးရကလည်း ဟောာင်ကောင်ရဲ့ တရားခံလွဲှဲပြောင်းရေး ဥပဒေမူကြမ်းကို အခိုင်အမာ ထောက်ခံကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိ အခြေအနေများအရ ဟောင်ကောင်မှာ နောက်ထပ် ဆန္ဒပြမှုတွေနဲ့အတူ မတည်ငြိမ်မှုတွေ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း ခန့်မှန်းသုံးသပ်မှုတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။